सबै अचिम्मित ! श्रीमतीले प्राण छाेडेकाे ३ घण्टामै श्रीमानको पनि गयाे प्राण, पूरा खबर हेर्नुहोस… – पुरा पढ्नुहोस्……
सबै अचिम्मित ! श्रीमतीले प्राण छाेडेकाे ३ घण्टामै श्रीमानको पनि गयाे प्राण, पूरा खबर हेर्नुहोस…
इटहरी : श्रीमतीको प्राण गएकै दिन श्रीमानको पनि आफसेआफ प्राण गयाे भन्दा सबैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । तर इटहरीमा यस्तै अनौठो घट्ना घटेको छ । जुन घट्नाले इटहरी १३ खनारका स्थानीय अचम्बित भएका छन् ।
इटहरी १३ की ७८ बर्षिय नर्वदा भट्टराईले मङ्गलबार ८ बज्न १५ मिनेट बाँकी रहदा प्राण गयो । घर परिवारमा रुवाबासी हुँदाहुँदै नर्वदाको ८६ बर्षिय श्रीमान टिकाप्रसाद भट्टराईको हर्ट अ *ट्याक भएर प्राण गएको आफन्तले बताएका छन् ।एकै परिवारमा अनौठो प्राण गएपछि गाउँलेहरु अचम्बित भएका छन् ।
स्थानीयले मृ *त्यु राम्रो भएको भन्दै खनार देखि इटहरीको बुढीखोलासम्म दुवै शबलाई परिक्रमा गदै एकै चितामा दाहसस्कार गरेको आफन्त विकास भट्टराईले बताए ।
एकै दिन अजुरबा अजुरआमाको मृ *त्यु भएको देख्दा लाग्यो अचम्म भयो विकास भन्छन् । यस्तो घट्ना कमै मात्र हुने गरेको भन्दै गाउँलेहरु अचम्बित बनेका छन ।
एउटै तिथिमा एकै परिवारको श्रीमान श्रीमतीको मृ *त्यु हनु अनौठो हो मलामी आएकाहरु भन्दै थिए । मुक्ति घाटमा एकै चितामा दुई शब जलाईयो ।
काठमाडौं– कतारको जेलमा परेका २२ बर्षे नेपाली केटो बिनोद रानाभाटको बिषय यतिबेला सामाजिक सँजाल फेसबुक र युटुबमा चर्चित छ । गरिब, दुखीका भगवान शिशिर भण्डारीले यो बिषयलाई आफ्नो युटुब च्यानल नयाँ नयाँ न्युज नेपालमा प्रसारण गरेपछि यो बिषय फेसबुकमा पनि भाईरल बन्यो ।
भारतियको ज्यान लिएको आरोपमा ३० महिना भन्दा बढि देखि जेलमा रहेका चितवनमा बिनोदको लागि सहयोग जुटाउन यतिबेला शिशिर भण्डारी लगायत अन्य जुटिरहेका छन् । यसैबिच बिनोद रानाभाटको घरमा यस्तो भएको छ ।
८२ लाख सहयोग उठाउनु पर्नेमा हाल यो अभियान उत्साहजनक रुपमा अघि बढ्दै ४० लाख भन्दा बढि बैंक खातामा जम्मा भैसकेको छ । केहि युवाहरुले सहयोग उठाउन यस्तोसम्म गरेका छन् ।यस बिषयमा शिशिर भण्डारीले फेसबुकमा लेखेका छन्- यि भाई बहिनीहरुको कति महान मन ।
कति राम्रो सोच । बिनोद रानाभाटको दुखद भिडियो हेर्ने बित्तिकै मलाई चितवनबाट पवन न्यौपाने भाईको फोन आयो । ‘शिशिर दाई, त्यो भिडियो हेरेर साह्रै दुख लाग्यो, म पनि हास्य कलाकार बन्न सँघर्ष गरिरहेको मान्छे आफुले जानेको कला देखाएर साथी भाई मिलेर बिनोदका लागि सहयोग जम्मा गर्छु है..कति उठ्छ पछि हजुरलाई भन्छु नि” फोनमा उनले यसै भने ।
मैले शुभकामना दिदै अघि बढ्न भने ।सडक-सडकमा, चोक -चोकमा केडी नृत्य, प्यारोडी गीत गाउँदै, मर्मस्पर्शी नृत्य देखाउँदै कतिको माया र घृणा पाउँदै आज यि भाई बहिनीहरुले लाख भन्दा माथिको सहयोग बि दको परिवारलाई बुझाएका छन् ।
अनि आफ्नै उमेरका बिनोद रानाभाट चाँडै नेपाल फर्केको हेर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । यो टिमलाई मेरा्े उच्च सम्मान ।
Prevकति कमाउँदा राज्यलाई कति कर तिर्नुपर्छ ? आजदेखि नयाँ आर्थिक बर्ष भयो… सुरू। बिबरण सहित हेरी सेयर गरौं…
Nextगरिब दुखीको हिरो शिशिर भण्डारी देशकै शिर उच्च पार्दै। बिनोद रानाभाटलाई कतारको जेलबाट निकाल्न आधा पैसा उठ्यो-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
गरिव छु, खानलाउन छैन, पढ्न सक्दिन, रेष्टिकेट गरिदिनुहोस् भनि पुजाले लेखिन यस्तो चिठ्ठी ! (भिडियो सहित) सिधाकूरा
भर्खरै अस्ट्रेलियाबाट रवी आए लाइव! सबैलाई यस्तो आग्रह सहित पोष्ट गरे यस्तो स्टाटस्.. हेर्नुहोस
खुशीको खबरः काेराेनाको प्रभाव चीनमा सकियो , चीनले गर्यो यस्तो प्रतिवध्दता हेर्नुस्
‘घुस लिदालिदै’ यसरी समातिए मालपोतका कर्मचारी .. (भिडियो सहीत)